DAYACTIRKA STRAWBERRY, RASPBERRY, STRAWBERRY: MAXAY MICNAHEEDU YAHAY - STRAWBERRIES
Waa maxay strawberry dayactir (raspberry, strawberry)
Bacaha iyo bannaanka u jira waxaa jira hadal ku saabsan nooc-soosaaray noocyo remontant of strawberries, strawberries, raspberries. Kuwo badan ayaa doorbida inay dhiraan oo keliya geedo, laakiin waxaa jira kuwa aan soo dhaweynin beerahooda beerahooda. Maxay yihiin sifooyinka geedaha remontant iyo maxay yihiin?
Ma taqaanaa? Dalagyada citrus, geedaha qurxinta, dhirta xashiishka ayaa sidoo kale ah dayactirayaal. Waxay leeyihiin marxalado daba dheeraaday oo lagu magacaabo burooyinkooda miro, laakiin horumarinta jeermiska ee peduncles ee xaaladaha diiran ayaa si dhaqso ah u gudbiya.
Maxaa dib u soo saaraya: farqiga u dhaxeeya noocyada caadiga ah iyo noocyada caadiga ah ee strawberries, raspberries, strawberries
Dayactirka macnaheedu waa awooda dhirta si ay u soo saaraan ubax iyo, si waafaqsan, marar dhowr jeer ku dhaji midho hal xilli ciyaareed. Ereyga waxaa laga soo qaatay erayga Faransiiska "remontant", taas oo macneheedu yahay "mar kale la duubo, kor u kaca."
Maxaa la beeray karaa inta u dhexeysa safarada strawberries dhalinyarada ah? Cagaarshow ayaa si wanaagsan u saameeya: digirta, isbinaajka, dhir, dhoobo, kaabajo, salaar, basasha, radishes, karootada, xididdo, dill.
Tilmaamahan ma aha oo kaliya calaamad u ah beerta beerta, laakiin ay duurjoogta duurjoogta ah. Sidoo kale waa dabeecadda noocyada kale ee dhirta. Muuqaal farabadan oo dhirta noocan oo kale ah - badanaaba miraha aan ka badneyn xajmiga dhirta aan la dayactir karin, iyada oo aan loo eegin inta dalag ee uu dhirta siinayo xilli kasta.
Si kastaba ha ahaatee, waxaa inta badan lagu qeexay sharraxaadda strawberries remontant in ay leedahay sifooyinka dabeecadda la yareeyo. Dhibaato kale waxay tahay in dhirta ayan ku noolaanin muddo dheer - celcelis ahaan laba sano.
Ma taqaanaa? Ingiriisida suugaantu waxay ku shaqaysaa noocyo kale oo la xidhiidha noocyo isku mid ah: dhicid - dhicid - xilliga dayrta, daa'imida - si joogto ah u karkaraya, dayrta xilliga dayrta - xilliga dayrta.
Fasalada caanka ah ee berry remontant
Waxaa jira noocyo badan oo la mid ah nooca berry ah. Waxay leeyihiin sifooyin u gaar ah ee sii kordhaya iyo dhalid.
Beerta beerta ee noocaan ah waxay soo saartaa dalag laba jeer sannadkii, laakiin waxa ay bixisaa khudradda yaryar ee aan haysan dhadhanka noocaas ah. Bukaarku wuxuu leeyahay caleenta daciif ah, waana mid gaaban. Si kastaba ha noqotee, noocyada noocyada strawberries wax badan ayaa soo booday. Qodobka ugu fiican ee strawberry waxaa laga helaa kuwaan:
"Mitse Nova", oo leh midho macaan marka la barbardhigo noocyo kale oo sarreeya;
"White Dream", caleenta kuwaas oo ay ku dhadhamiyaan cananaaska;
"Arapaho" - noocyada kor u kaca iyo noocyada sarraysa, oo laga helay Maraykanka;
"Lyubasha" waa nooca cusub ee strawberry ee isticmaalka guud, wuxuu hore u yareeyey oo waa baraf u adkaysta.
Sidoo kale ka mid ah noocyada caanka ah ee qiimeynaya "Irm", "Tristar", "Fort Laremi", "Red Rich", "Ozark Beauty", "Tribute", "Superfekshn", "Geneva".
Waa muhiim! Saamiga saamiga ee noocyada noocan oo kale ah waa caadi ahaan 30% marka la geliyo gelitaanka koowaad iyo 70% marka labaad.
Isu diyaari xaqiiqada ah in sariiraha leh duurka khadadka leh ay si joogto ah u noqon doonaan meelo kala duwan. Xaqiiqdu waxay tahay in ka dib markii goosashada ugu horeysay ee duurka u dhintaan. Hawlgalku wuxuu sii socdaa midho goosi ah. Ugu badnaan barkada dayactirka ku noolaan karaa waa saddex sano.
Si aad u hesho goosashada wanaagsan, waxaad u baahan tahay inaad ogaato cayayaanka strawberries iyo sida loola macaamilayo: aaladaha, bronzovka, aphid, slugs, cockchafer, nematode, weevil, lafaha, caarada caarada.
Calaamadaha dayactirka waxaa lagu arkay labada beerta iyo strawberries duurjoogta ah. Si kastaba ha ahaatee, waxay soo saari kartaa miraha dhexdhexaad ah iyo weyn. Waxay billaabmaysaa inay midho u dhaliso badhtamaha bisha May, waxayna sii socotaa ilaa dhaxalka koowaad. Si kastaba ha noqotee, dalagga ugu weyn waxaa la qaadan karaa oo keliya laba sano ee ugu horreeya ee nolosha geedka. Markaas, si tartiib tartiib ah, xooggiisu waa mid si ba'an u demisay, iyo geedka waa in si buuxda loo bedelo.
Bannaanka u badan xusuusnaado in noocyo remontant of strawberries yihiin si muuqata ka liidato dhadhan kuwa dhadhan caadiga ah. Si kastaba ha ahaatee, waxay si wadajir ah u koraan oo u kiciyaan noocyo kala duwan. Qofka ugu caansan waxaa loo yaqaan "White Monthly White" iyo "Monthly Gridneva", kaas oo jilbaha oo kaliya ku tarma. Waxaa ka mid ah kuwa lagu boodi karo iyada oo loo qaybinayo baadiyaha, waxaa habboon in la xuso "Hummi Gento", "Ostara", "Mount Everest".
Caadi ahaan raspberries ee noocyo noocan oo kale ah ayaa lagu beeray si ay u helaan tiro badan oo mid ka mid ah by mid ka mid ah ilaa dayrta. Laakiin waxaa la rumaysan yahay in goosashada xilliga dayrta ay aad u liidato dabeecadeeda dhadhanka, sida geedka kowaad ee xagaaga ay bixiso badi kheyraadka gudaha.
Maanta Mareegta dayactirka waxay leedahay noocyo kala duwan oo kala duwan. Marka aad dooratid, waxaa lagama maarmaan ah in diiradda lagu saaro ciidda iyo shuruudaha cimilada ee mid kasta. Celcelis ahaan, waxay soo saaraan 1.7-3.7 kg oo miro ah oo ka yimid hal baadiyaha. Noocyada "Elegant", "Ruby Necklace", "Bryansk Miracle", "Atlant", waxay soo saari kartaa wax ka badan 20 tan oo duurka.
Wax soo saarka waxay ku xiran tahay miisaanka celceliska ee berry, lambarkooda mid ka mid ah biqil, tirada caleemaha noocan oo kale ah hal baadiyaha. Intaa waxaa dheer, xaaladaha cimilada ayaa sidoo kale saameyn ku leh dhalidda, taas oo u oggolaanaya ama ha u oggolaanin in ay u bislaadaan dalagga oo dhan on baadiyaha.
Sidaa daraadeed, gobollada waqooyi, waxay badanaa jecel yihiin inay kobcaan noocyo kala duwan sida Eurasia, Hercules, iyo Bryansk Miracle, oo xaaladaha qaboobaha leh waqti ay ku siiyaan 1.3-1.6 kg halkii geed. Waxaa ugu xun midhaha oo dhan xaaladahaas, "Brilliant", "Indian Summer". Waxtarkooda ayaa celcelis ahaan ah 1 kg halkii baadiyaha.
Waa muhiim! Marka aad iibsaneyso geedo, ka hubi iibiyaha waxa raspberry remontant yahay. Marka la eego berrito, ereygan wuxuu yeelan karaa macnaha kaladuwan - noocyo badan oo midho dhaliya caleemaha sanadlaha ah iyo labadii sanno.
Dhibaatada sii kordhaysa raspberries remontant remake waxay ku dhalinaysaa habka dhaqameed. Sida caadiga ah, noocyo noocan oo kale ah waxay bixiyaan caleemo yaryar oo yaryar, taas oo abuuraysa yaraanta wax soo saarka. Dhanka kale, for geedo noocan oo kale ah si fudud u daryeelo.
Talooyin loogu talagalay berry sii kordhaya
Caadi ahaan, dhirtaas waxaa lagu beeray dhinaca koonfureed ee meelaha cirridka iyo meelaha ugu kulul ee beerta si ay u helaan goosashada munaasibka ah. Laakiin haddii aan ka hadlayno gobollada koonfureed, ka dibna waxaa lagu beeran karaa hooska qayb ahaan, xitaa hooska. Waa suurad wacan in ciidda uu ahaa mid bacrin ah oo dabacsan. Laakiin weli, ka dib markii la waraabiyo waa suurad wacan in la dabciyo oo laga saaro caws.
Si loo xaliyo cilladaha suurtagalka ah ee noocyada remontant (wax-soosaarkooda yar, luminta dhadhanka iyo tayada dibadda), bannaanka qaar ayaa doorbida inay diidaan goosashada ugu horeysay. Xaqiiqdii, ma aha mid muhiim u ah sida labaad. Sidaa darteed, waxay si daacad ah u jeexi caws ubax hore.
Haddii ay kugu adagtahay inaad dooratid strawberries, waxaad arki kartaa noocyada ugu fiican: Masha, cabbirka Ruushka, Elizabeth 2, Albion, Queen Elizabeth, Marshal, Sayid, Aasiya.
Xaaladda strawberries, waxay mararka qaarkood diidaan ka goosashada labaad. Xalkani wuxuu ka caawiyaa helitaanka antennae ee warshadda, maxaa yeelay ma siinayso awood si loo sameeyo qaabka saldhigyada. Si arrintan loo sameeyo, strawberries ee xagaaga gooyay caws ubax oo dhan iyo bacriminta nitrogen ka dhigi.
Guud ahaan, noocyada noocan ah waxay u baahan yihiin nitrogen ku filan, potash iyo Bacriminta Fosfat. Run, waxaa la rumaysan yahay in aan dambe loo baahnayn isticmaalka. Urea, Bacriminta organic, Nitrate ammonium waxay saameyn wanaagsan ku yeelataa beergooyska.
Inta lagu jiro ubax, waxaa lagu talinayaa in la isticmaalo Bacriminta macdanta. Biyaha waa in ay noqdaan kuwo baqdin leh, laakiin ha buuxin. Si looga fogaado joogitaanka biyaha, waxaa lagula talinayaa in lagu daboolo ciidda.
Sida for strawberries, waxaa aan la baabbi'in ka hor dhaxan ugu horeysay. Kaliya kadib dhaxan duurka dhowr jeer, waxay ku xiran yihiin jiilaalka, ka dibna daboolay mulch.
Dhirta dayactirka - tani waa wax weyn oo lagu daray dhalidda. Taas macnaheedu maaha in qofku diidi doono inuu dhowr jeer ku soo celiyo miraha xagaaga. Laakiin waa in aan maskaxda ku heynaa in faa'iidooyinkaasi ay isku dheelitiraan tiro yar oo khafiif ah: nolosha gaaban ee geedka iyo hoos u dhaca dhadhanka midhaha.